KN-700T Wiricheya - Karman Healthcare (K0001) Deluxe Yakajairwa
musha / chitoro / Chinyorwa Wiricheya
KN-700T Wiricheya ndiyo yedu Yekutanga yakakosha Mutsetse kumusoro
Wiricheya ine zvinotevera zvinhu: Braking System. Iine huremu hwemapaundi makumi matatu nemapfumbamwe, anova mapaundi matanhatu anorema kupfuura avhareji emaWheelchair ese eMawoko, wiricheya inogona kubata mapaundi mazana maviri nemakumi mashanu, inova yepakati yemawiricheya emawoko.
Zvimwe zvezvinhu zvikuru zvaunowana pane ino yuniti zvinosanganisira yayo yekumisikidza armrest uye yekumisidzana-kure tsoka yekumakumbo ichiita kuti zvive nyore nyore kupinza mukati nekubuda pawiricheya uye nyore kwekuwana matafura uye kumwe kushandiswa kweichi chiitiko. Iyi unit ine yakanyatsogadzirwa vinyl upholstery iri nyore kupeta. Unogona kuripeta mumasekondi; zvichiita kuti ive sarudzo hombe kune ari kuenda mushandisi. Iyo nyaradzo inonyatso kuvakwa muchigaro ichi ichipa yezuva rese nyaradzo uye tsika inogadzikiswa tsoka.
hapana Yakazara Swing Inobviswa Kukwidza (+ $ 60.00)
6, Akaputsa Zano Kuwedzera (+$12.00)
8, Akaputsa Zano Kuwedzera (+$12.00)
KN-700T - 39 lbs huwandu
SKU: KN-700T Categories: Wiricheya isingaremi, Chinyorwa Wiricheya, Mawiricheya akajairwa Tags: wheelchair isina mwero, wiricheya, mavhiripu
Inosvikika / Yakashongedzwa padhesiki kureba armrests ine chiwanikwa padivi gadhi
Kufamba-kure / Kureba zvigadziriso zvetsoka zvine chitsitsinho chiuno
Dual-ekisero / Seat kukwirira chinjika furemu
24 ”Kumashure Mag mavhiri ane rubber akapfava emahara matai
Yakakwira-giredhi / Padded murazvo unokanganisa vinyl upholstery
Takura homwe pane backrest
Chigaro chakafara: 16 ", 18"
Kurema Pasina Riggings 39 lbs.
Kutumira Kukura 34.0, L x 37.0, H x 13.0, W
KN-700T wiricheya UPC #